Su'aalaha La Weydiiyo | Jiangxi OK Sayniska iyo Teknolojiyada Co., Ltd.
Waa maxay muddada dammaanadda ee mashiinkaagu?
hal sano laga bilaabo taariikhda rarka. Inta lagu jiro muddada damaanadda, haddii alaabtu ay leedahay dhibaatooyin tayo leh (oo hoos imanaya gobolka caadiga ah ee shaqeynaya), alaab-qeybiyaha ayaa mas'uul ka ah beddelidda qaybaha jabay, oo waa lacag la'aan. Xaaladaha soosocda ee muddada dammaanad qaadka ah bilaash ma ahan: A. Haddii qeybaha ay waxyeello ka soo gaarto hawlgallada sharci darrada ah ee iibsadaha ama arrimaha deegaanka, iibsaduhu waa inuu iibsadaa oo beddelaa qaybaha ka soo iibiyaha oo uu qaataa kharashyada u dhigma; B. Beddelka qaybaha la isticmaali karo inta lagu jiro muddada damaanadda kama tirsanaanayso baaxadda bilaashka ah, iyo qalabka dayactirka ee bilaashka ah ee lagu keenay mashiinka waxaa leh qaybo la isticmaali karo
Mishiinkee ayaan ka dooranayaa taxanahaaga wax soo saarka?
Waxaan ka sameysannaa warqado nudaha loo beddelo iyo mashiinno wax lagu duubo, mashiinno sameynta maaskaro la tuuri karo.
Haddii aad u baahan tahay mashiinka beddelaya nudaha, fadlan bixi caddayntaada warqadda jumbo, soosaarka nudaha unugyada dhammaaday.
Haddii aad u baahan tahay mashiinka wax lagu duubo, fadlan soo qaado foomka xirmada unugyadaada iyo ogaanshaha xirmada.
Haddii aad u baahan tahay xariiq dhammeystiran oo ka bilaabmaya nudaha u beddelaya xirxirida, fadlan bixi qaab-dhismeedkaaga warshad, faahfaahinta warqadda jumbo, soo-saaridda awoodda, foomka xirmada unugyada, waxaan sameyn doonnaa xarriiq dhammaystiran oo ay ku jiraan unugyada beddelaya iyo mashiinka wax lagu raro iyo dhammaan gudbiyaha lagama maarmaanka nidaamka xakamaynta.
Haddii aad u baahan tahay mashiinno sameynta maaskaro, fadlan bixi sawirrada maaskaro oo codso.
Waxaan kugula talin doonnaa oo aan ku siin doonnaa qaabka ugu habboon ee saldhigga mashiinkeenna macluumaadka kor ku xusan.
waa maxay adeegga iibka ka dib markaan helno mashiinno?
Xaaladda caadiga ah, markay makiinaduhu yimaadaan, iibsaduhu waa inuu koronto iyo hawo ku xidhaa mashiinnada, ka dib iibiyayaashu waa inay u diraan farsamo yaqaan si ay u rakibaan khadka wax soo saarka. Iibsaduhu wuxuu ka bixin doonaa tikidhada duulimaadka ee safarka wareega ee laga soo qaado warshada Shiinaha ilaa warshadda iibsadaha, kharashka fiisaha, gaadiidka cuntada iyo hoyga. Waqtiga shaqada ee farsamayaqaannaduna waa 8 saacadood maalintii oo leh mushaar maalinle ah USD60 / qof.
Iibsaduhu wuxuu sidoo kale siin doonaa turjubaan Ingiriis-Shiino ah oo caawin doona farsamo yaqaanada
Inta lagu jiro xilliga faafitaanka adduunka, iibsaduhu waa inuu ogaadaa in iibiyaha uusan awood u lahayn inuu u diro injineer rakibaadda mashiinka iyo hawlgelinta. Maamulaheena iibka iyo injineerku wuxuu kugu hagi doonaa / kugu taageeri doonaa isgaarsiinta fiidiyowga / sawirka / taleefanka. Ka dib marka fayrasku dhammaado oo jawiga adduunku noqdo mid ammaan ah, oo fiisaha iyo duulimaadyada caalamiga ah iyo siyaasadda gelitaanka la oggol yahay, haddii iibsaduhu u baahan yahay injineer inuu u safro taageero, iibiyayaashu waa inay u diraan farsamo yaqaan si ay u rakibaan mashiinka. Iibsaduhu wuxuu bixin doonaa kharashka fiisada, tikidhada duulimaadka ee tikidhada duulimaadka ee laga soo qaado warshadda Shiinaha illaa warshadda buye, gaadiidka cuntada iyo hoyga magaalada iibsadaha. Mushaharka farsamayaqaanku waa USD60 / maalin / qof.